Ny tantara ao ambadiky ny “El árbol del amor,” horonan-tsarimiaina fanadihadiana avy amin’ny vondrom-piarahamonina indizeny Nasa any Kolombia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2019 5:50 GMT
Nanasarotra ireo tantara mamim-bahoaka sy ireo tantara mirakitra ny soatoavina ho an'ireo ankizy “terena” hiditra ao anatin'ny fifandònana mitàm-piadiana ny tantaran'i Sek milaza ny antony nahatonga azy ho ao amin'ny Tafika revolisioneran'i Kolombia ( FARC ho an'ny fiandohan-teniny amin'ny teny Espaniola), tafika mpikomy any Kolombia. Tsy nitovy tamin'izany ny zava-nisy marina – ary mbola mitohy misy.
Sek (Msaoandro) sy A’te (Volana) no mpilalao fototra ao amin'ilay sarimiaina el árbol del amor na Ilay hazon'ny Fitiavana. Mpilalao noforonina izy roa ireo, fa tantara marina natsangana avy tamin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo ankizy 25 mpiady tranainy notsongaina sy ireo tanora sisa velona tamin'ilay fifandonana nisy tao amin'ny indizeny Nasa tao amin'ny valan-javaboaharin'i Jambaló, Cauca any atsimo andrefan'i Kolombia kosa ilay tantarany.
Tetikasa tarihina ekipanà mpikaroka sy olona zà-draharaha avy any amin'ny Oniversiten'i Bournemouth, any Angletera ary niarahana niasa tamin'ny Fikambanana Norveziana miaro ireo mpitsoa-ponenana sy ny fikambanana kolombiana mpanao asa soa Fondación Fahrenheit 451 ary ny Tyet ny ‘el arbol del amor’ , sady nifototra taminà andianà atrikasa naharitra telo volana niaraka tamin'ireo ankizy sy tanora 9 hatramin'ny 24 taona .
Hatramin'ny nisian'ilay fifanaraham-pandriampahalemana manantantara tamin'ny 2016 teo amin'ny governemanta kolombiana sy ny hery ankavia mpiady anaty akata FARC, dia nekena, tamin'ny ankapobeny, fa ny fanaovangazety dia manana andraikitra hikolokolo ny fandriampahalemana sy afaka mitaona ho amin'ny fampihavanana. Saingy ny ankamaroan'ny fandrakofan'ny haino aman-jery ao an-toerana ny momba ilay fifandonana dia mijanona amin'ny loharanom-baovao avy amin'ny governemanta sy ny tafika fotsiny, tsy navela ho re ny feon'ireo niharam-boina.
Na izany aza, sarotra izany asa izany, raha fitadiavana fahamarinana, na fahamarinana iray, dia fahamarinana ampy hampisaintsaina no antenain-dry zareo ho hita. Nisongadina tao amin'ilay eftrano ny lanjan'ny tantara : tanora anankiray mpiady taloha no nizara ny tantarany tamim-pihetsehampo, efa notantarainy izany tany aloha, fa araka ny nolazainy, tamin'ity toe-draharaha ity sy tamin'io fotoana io dia te-hahazo “izany zo izany ho an'ny reniko”, izay maty tanora tamin'ny fifandonana izy. Andro maromaro taorian'ny fitsidihanay dia neken'ny Vaomiera ho vavolombelona ôfisialy ilay horonantsary.
Vao haingana no natao lohateny lehibe tao amin'ireo gazety lehibe mpiseho isanandro tany Kolombia ity tetikasa El Espectador ity, miaraka amin'ny ‘podcast’ natokana ho an'ny horonantsary.
Nandray fitenenana ny Loholona kolombiana, Feliciano Valencia, izay misolo tena ny vondrom-piarahamonin'ny indizeny Nasa tamin'ny famoahana voalohany nataonay tao amin'ny Cine Tonalá any Bogotá :
26 Mey 2020Media sy Fanoratan-gazety